Van Dijk oo ka hadlay xaallada Man United kahor kulanka ay ku wada ciyaari doonaan Old Trafford – Gool FM
(England) 18 Okt 2019. Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa kahor kulanka Axada ka dhici doono garoonka Old Trafford ee horyaalka Premier League wuxuu sheegay in Manchester United aysan ku jirin xaalad fiican gaar ahaan xilli ciyaareedkaan.
Dhinaca kale Virgil van Dijk ayaa tilmaamay inay jiraan kulamo kaga muhimsan marka loo fiiriyo ciyaarta “Premier League El Clasico” ay ku wada ciyaari doonaan kooxda Manchester United.
Manchester United ayaa Axada ku soo dhaweyn doonto garoonkeeda Old Trafford kooxda Liverpool, si ay u wada ciyaaraan kulanka ugu adag toddobaadka soo socda horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa ku jirta kaalinta 12-aad ee dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League iyadoo leh 9 dhibcood qura, halka Liverpool ay fadhiso fiida sare ee hogaanka.
Red Devils ayaa waxaa kulankan ciyaari doontaa la’aanta xiddigaha David de Gea iyo Paul Pogba, sababa la xiriira dhaawacyo kala duwan ay qabaan, taasoo xaalada ku sii adkeeneysa kooxda United-ka.
Haddaba shabakada “Sky Sports” ayaa waxay shaaca ka qaaday wareysi uu dhawaan bixiyay daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marka loo fiiriyo Manchester United, kuma jirto xaalad fiican kaddib dhaawaca soo gaaray goolhaayaheeda koowaad, kaasoo lagu tiriyo inuu yahay mid ka mid ah goolhaayaasha ugu fiican addunka, laakiin Liverpool ahaan, waxaan kaliya diirada saareynaa nafteena”.
“United waxay dooneysaa inay soo laabato, kaddib qaabka xun ay kaga bilaawdeen xilli ciyaareedkan, waxaana dooneynaa inaan helno dhibcaha kulanka, si aan u sii wadno guulaha xiriirka ah”.
“United kuma jiraan waqtigooda ugu fiican, kooxda wax kalsooni ah kuma qabto nafteeda, laakiin kubadda cagta waad ku soo laaban kartaa waqti kasta, kulanka soo aadan waa fursada ugu fiican ay markale ku soo laaban karaan”.
“Dabcan waa kulan weyn, laakiin waxaan aaminsanahay in kulamada tartanka Champions League ay aad ugu muhiimsan yihii kulankan”.